अनलाइन सपिङ कम्पनी ‘दराज’बाट स्मार्ट वाच किन्दा ठगिए कवि रमेश सायन ! | Diyopost - ओझेलको खबर अनलाइन सपिङ कम्पनी ‘दराज’बाट स्मार्ट वाच किन्दा ठगिए कवि रमेश सायन ! | Diyopost - ओझेलको खबर
अनलाइन सपिङ कम्पनी ‘दराज’बाट स्मार्ट वाच किन्दा ठगिए कवि रमेश सायन !
दियो पोस्ट मंगलबार, आश्विन १२, २०७८ | १८:१८:५३
बुटवल । अनलाइन सपिङ कम्पनी ‘दराज अनलाइन’ले उपभोक्ता ठग्ने गरेको धेरै समाचाहरु बाहिर आउने गर्दछन् । तर कारबाही गर्नु पर्ने निकायको रहस्यमयी मौनताका कारण दराजको मनोमानी रोकिएको छैन ।
पद्मश्री साहित्य पुरस्कारले सम्मानित लेखक तथा साहित्यकार रमेश सायनले गएराति एक भिडियो पोस्ट गर्दै दराजले आफूलाई ठगेको खुलसा गरेका छन् ।
“मैले दराजबाट एउटा स्मार्ट वाच मगाको थिएँ, म बस्ने होटल ९बुटवल० मै त्यो स्मार्ट वाचको पाकेट आइपुग्यो । डेलीभरी ब्वाईले मेरो निर्देशनबमोजिम नै म बस्ने होटलमा ल्याएर समान छोडीदिएको रहेछ । होटल साहुले उहाँ ९डेलीभरी ब्वाई०लाई पैसा दिएर मेरो कुरिएर रिसिभ गर्दिनुभएछ”, उनले खोलिसकेको प्याकेट देखाउदै भनेका छन् ।
भिडियोमा अगाडी प्यान बिल र स्क्याच गर्न मिल्ने बिल देखाएपश्चात उनले स्मार्ट वाच देखाए, जुन वास्तवमा स्मार्ट वाच थिएन । अरू नै केही वस्तु थियो । यसप्रकार स्मार्ट वाच भनेर अरु नै वस्तु आफूलाई थमाएपश्चात आफू ठगीएको उनले बताए ।
यस अघि पनि पटकपटक उक्त शपिङ पोर्टलमार्फत उपभोक्ता ठगिएको चौतर्फी गुनासोरआलोचना आइरहेकै थियो । अघिल्लो पटक बजार मूल्यभन्दा २ सय प्रतिशतले मूल्य बढाएर १ सय प्रतिशत छूट दिएको भन्दै उपभोक्ताले तीव्र आलोचना भएको थियो । बजारका पसल र दराजमा रहेका सामग्रीसँग एउटै वस्तुको मूल्यको तुलना गर्दा बाहिरका पसलभन्दा दराजबाट अनलाइन शपिङमा सामान महँगो परेको पाइएको थियो ।
यसैगरी, भाँडाकुँडा, कपडा, गरगहना, मोबाइल, ल्याटपजस्ता सामान बेच्दै आएको उक्त कम्पनीले हेर्नै नदिई आफूले मगाएकोभन्दा कम गुणस्तरको सामानलाई बढी मूल्य लिएर ठग्दै आइरहेकै छ । उपभोक्ताले महँगो परेको भनेर गुनासो गर्दासमेत दराजले मूल्य परिमार्जन नगरेको पनि देखिएको थियो । यति मात्रै नभएर दराजको सामान न्यून गुणस्तरको रहेको, ढिलो डेलिभरी गर्ने र एउटा सामान अर्डर गर्दा अर्कै सामान उपभोक्ताले प्राप्त गर्नेजस्ता समस्या पनि देखिरेहका छन् ।
अहिलेको समय सूचना तथा प्रविधिको हो । पछिल्लो समय मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँग नेपाल पनि यसबाट अछुत रहेको छैन । तर, अन्य विकसित देशको प्रविधिको सिको गर्ने चासो र रहरलाई सदुपयोग गर्दै केही व्यक्तिले भने यसलाई संगठित रूपमा नयाँ प्रविधिलाई ठगी खाने भाँडो बनाइरहेको भेटिएको हो ।
चाडपर्व सुरु भएसँगै अनलाइन सपिङ र भारी छुटको नाममा ‘दराज’ जस्ता पोर्टलहरूले उपभोक्तालाई ठग्ने काम भइरहेको कुरा सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न सकिन्छ । आक्रामक प्रचार शैलीमार्फत उपभोक्तालाई विभिन्न वहानामा ठगीमा अपरिरहेको गुनासोहरू उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन्।
के छ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा ?
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागु भएको हो ।
ऐन अनुसार खरिद तथा बिक्री गर्दा बिलबिजक अनिवार्य लिनेदिने गर्नुपर्छ। बिलबिजकजारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसलाई नियमन आवश्य रहेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन्। यो कम्पनी २०७३ फागुन १४ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा ‘क्यामु दराज कम्पनी प्रालि’को नाममा दर्ता छ। विभागका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न वाणिज्य विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ। चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाको लगानी भित्र्याएको यो कम्पनी कारोबारका लागि वाणिज्य विभागमा दर्ता भने छैन ।
मंगलबार, आश्विन १२, २०७८ | १८:१८:५३